Family Locator & Device Manager - TrackView 3.4.14-fmp Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.4.14-fmp လြန္ခဲ့ေသာ6လက
Application မ်ား ေနအိမ္ & အိမ္ Family Locator & Device Manager - TrackView
Family Locator & Device Manager - TrackView ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
TrackView GPS တည်နေရာ, အဖြစ်အပျက်ထောက်လှမ်း, တပ်လှန့်နဲ့ cloud / လမ်းကြောင်းမှတ်တမ်းတင်စွမ်းရည်နဲ့ချိတ်ဆက် IP ကိုကင်မရာသို့သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်း, Tablet နှင့် PC များပြန်သွားလေ၏။ အဆိုပါ Windows နဲ့ Mac version ကိုကြှနျုပျတို့၏ website ကနေအခမဲ့ download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
TrackView အခြားလုံခြုံရေးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု apps များထက် သာ. များသော features တွေရှိပါတယ်။
TrackView In-app ကိုဝယ်ယူပေးထားပါတယ်။ ဝယ်ယူမတိုင်မီပထမဦးဆုံးအခမဲ့ features တွေကြိုးစားပါ။ ကျနော်တို့ပြန်အမ်းငွေကို process ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဝယ်ဖို့ပစ္စည်းကိရိယာများမရှိရှုပ်ထွေးဝါယာကြိုးအဘယ်သူမျှမကသင်သည်ထက်လျော့နည်းတစ်မိနစ်အတွက်သင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာ TrackView install နိုငျပါသညျ!
1. မိသားစုတည်နေရာနဲ့ GPS စနစ် Finder
နေအိမ်လုံခြုံရေးအတွက် 2. IP ကိုကင်မရာ
သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်3ပွဲ detection နဲ့ချက်ချင်းတပ်လှန့်
ကအသံတိတ် mode မှာဖွင့်လျှင်ပင်, တစ်ဦးပျောက်ဆုံး device ကိုမြည်ကြောင်း 7. အဝေးမှ buzz
မှောင်မိုက်၌သင်တို့ကိုတွေ့မြင်အထောက်အကူပြု 8. ညရူပါရုံကို mode ကို
9. Motion နဲ့အသံထောက်လှမ်း
backup လုပ်ထားရန် 10. မိုးတိမ်သိုလှောင်မှုသင့်ရဲ့အသံသွင်း
11. App ကိုသင့်ရဲ့ဘက်ထရီ conserves ကြောင်းနောက်ခံနဲ့အိပ်စက်ခြင်း mode မှာအလုပ်လုပ်တယ်
12. အမြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်သင့်ဒေတာအသုံးပြုမှုကယ်တင်ကြောင့်အနိမ့် bandwidth ကိုမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗွီဒီယိုအရည်အသွေး
တပ်ဦးနှင့်နောက်ကင်မရာ switch ရဲ့ 14 အဝေးမှထိန်းချုပ်
Google က Gmail အကောင့်နှင့်အတူ 15 ပေါင်းစည်းရေး
16. စိတ်ချရလက်လှမ်း: သင့်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေရယူနိုင်သူတစ်ဦးတည်းသာရှိပါသည်။
17. Multi-ကွန်ယက်ကိုထောက်ခံမှု: TrackView ကွန်ရက်များအမျိုးအစားအားလုံးကိုထောက်ခံပါတယ်: ဝိုင်ဖိုင်, 2G, 3G, 4G စသည်တို့ကို
18. အလိုအလျောက်ကွန်ယက်ကို switch ကို: တဲ့အခါမှာကွန်ယက် switches များ, TrackView ရရှိနိုင်ကွန်ယက်မှအလိုအလျောက် switch သည်မည်။
19. ရီးရဲလ်-အချိန်နှင့်အနိမ့်အောင်းနေချိန်: သင်ချက်ချင်းဖြစ်ရပ်များအပေါ်အပ်ဒိတ်များရရှိရန်နှင့်စစ်မှန်သောအချိန်ဗီဒီယိုကိုကြည့်သေချာစေရန်။
20. က Universal အသုံးပြုနိုင်စွမ်း: ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာမှသင်၏ထုတ်ကုန်မဆိုရယူသုံးပါ။
TrackView တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ကလစ်ရုံစုံတွဲတစ်တွဲ, သငျရှိပါတယျ။
သငျသညျ TrackView မှ login ရန်သင့်ရှိပြီးသား gmail အကောင့် user name နဲ့ password ကိုသုံးနိုင်သည်။ အားလုံးပစ္စည်းများမှ login မှတူညီသောအကောင့်ကိုသုံးပါ။ သူတို့ကိုသင်ခွဲခြားနိုင်အောင်ရဲ့ login မီ, ထို့အပြင်သင့်ရဲ့ device ကိုမှတစ်မူထူးခြားသောကိရိယာအမည်ကိုပေးပါ။
သငျသညျ logged-in ကိုမျိုးစုံထုတ်ကုန်များနှင့်တပြိုင်နက်, သင်သည်စောင့်ကြည့်ကိုခြေရာခံ, ဒါမှမဟုတ် click တစ်ချက်ကဝေးလံခေါင်သီ device ကို Buzz နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းယင်းသတိပေးချက်မက်ဆေ့ခ်ျစစ်ဆေးစံချိန်နှင့်သင့်ကလစ်များပြန်ဖွင်နိုင်ပါတယ်။
E-mail ကို: support@trackview.net ။ သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စများသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကငါတို့သည်သင်တို့ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်။
Family Locator & Device Manager - TrackView အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Family Locator & Device Manager - TrackView အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Family Locator & Device Manager - TrackView အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Family Locator & Device Manager - TrackView အား အခ်က္ျပပါ
india-market စတိုး 48.99k 21.25M
Family Locator & Device Manager - TrackView ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
Universal TV Urruneko kontrola
ေနာက္ထပ္ ေနအိမ္ & အိမ္ အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Family Locator & Device Manager - TrackView အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.4.14-fmp
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://trackview.net/privacy.html
App Name: Family Locator & Device Manager - TrackView
Release date: 2019-03-14 10:27:01
လက်မှတ် SHA1: CB:97:E7:1A:FA:46:65:D6:D2:86:97:B9:19:70:46:C8:1E:5E:5D:6C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ming Jia
Family Locator & Device Manager - TrackView APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ